Villa SOMALIA oo kordhisay ka qeyb-galayaasha shirka Dhuusamareeb iyo khilaaf laga cabsi qabo (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar Villa SOMALIA oo kordhisay ka qeyb-galayaasha shirka Dhuusamareeb iyo khilaaf laga cabsi...
Villa SOMALIA oo kordhisay ka qeyb-galayaasha shirka Dhuusamareeb iyo khilaaf laga cabsi qabo (Warbixin)
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wafdiga u raacaya shirka berri ka furmaya Dhuusamareeb ku daray ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Caasimada Online.
Sida aan xogta ku helnay, Mahdi Guuleed oo kasoo jeeda gobollada Waqooyi ama Somaliland, ayaa madaxweynuhu uu ku doodayaa inuu shirka ku matalayo gobollada Waqooyi, maadaama uusan jirin maamul matalaya.
Si kastaba, waxaa la filayaa in tani ay diidmo ka muujiyaan madax goboleedyada, maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo matalaad noocan ah loo muujiyo Somaliland, waxaana qaarkood ay u arkaan inay qeyb ka tahay dadaallada Villa Somalia ee lagu doonayo in shirka lagu fashiliyo.
Madax goboleedyada ayaa casuumay kaliya ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, taasi oo horseeday in guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu sheego inuusan aqbali doonin go’aanada shirka. Mursal ayaa la rumeysan yahay inuu ka carrooday inaan waxba laga soo qaadin.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo ku sugan Garowe, ayaa suurta-gal ay tahay inuu shirka tago. Haddii taas ay dhacdo waxay kasii carreysiin doontaa Mursal. Cabdi Xaashi ayaa la rumeysan yahay inuu ku aragti yahay madax goboleedyada uuna rumeysan yahay in dalkan aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah.
Dhanka kale waxaa Dhuusonareeb ku sugan Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yarey. Sida aan xogta ku helnay, Xaliimo Yarey laguma casuumin shirkan, waxaase tegitaankeeda wax ka og Villa Somalia.
In la kordhiyo dadka ka qeyb-galaya shirka ayaa ah xeelad Villa Somalia ku dooneyso inay shirka uga dhigto mid ballaaran, si loo yareeyo saameynta madax goboleedyada, iyo in la helo garabyo taageersan marka la gaaro xilliga go’aan qaadashada shirka.
Haddii aan xal loo helin su’aasha ah yaa ka qeyb galaya shirka, madax goboleedyadana ma aqbali doonaan dhinacyada ay wadato Villa Somalia? Waxay horseedi kartaa in furitaanka shirka dib u dhaco.